सावधान ! कपालमा स्याम्पु लगाउँदा यस्तो गल्ती गर्नुभएको छैन् ? – Dailny NpNews
सावधान ! कपालमा स्याम्पु लगाउँदा यस्तो गल्ती गर्नुभएको छैन् ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: १२:५०:४२
कपालको लागी स्याम्पु किन्दा हामी धेरै ध्यान राख्ने गर्दछौँ तर कपालमा स्याम्पु लगाउँदा त्यति ध्यान पुर्याउदैनौ र प्रायजसो: हामी गल्तीहरू गर्ने गर्छौं । जसको परिणाम स्वरूप हाम्रो कपाल झर्ने र कमजोर हुने समस्या देखापर्छ । कपालमा स्याम्पु लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुराहरू यस्ता छन्, जान्नुहोस्।
-प्रायजसो: हामी सोच्ने गर्छौं कि अधिक स्याम्पुको सेवनले कपाल सफा र बलियो हुन्छ तर यो गलत हो । अधिक स्याम्पु सेवन गर्नाले नोक्सान पुर्याउँछ । कपालको लम्बाई अनुसार नै स्याम्पु लगाउनु पर्दछ ।
-कयौँ पटक हामी हतार-हतारमा टाउकोमा स्याम्पु सही तरिकाले सफा गर्दैनौ र कपालमा स्याम्पु रहने गर्दछ । जसको कारण कपाल झर्ने समस्या शुरू हुन्छ ।कयौँ पटक हामी हतार-हतारमा टाउकोमा स्याम्पु सही तरिकाले सफा गर्दैनौ र कपालमा स्याम्पु रहने गर्दछ । जसको कारण कपाल झर्ने समस्या शुरू हुन्छ ।
-स्याम्पु सफा गर्नको लागी टाउकोमा बल गरेर मसाज गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा कपाल कमजोर हुने र झर्ने समस्या हुन्छ । यसको लागी औँलाको सहायताले स्याम्पु निकाल्नुहोस् ।
-स्याम्पुलाई हातमा राखेर लगाउनुहोस् किनभने सिधा टाउकोमा राख्दा एकै ठाउँको कपाल रुखो हुने गर्छ ।
-स्याम्पु मनतातो पानीको साथमा लगाउनुहोस् । धेरै तातो पानी प्रयोग गर्नुहुँदैन । तातो पानीको साथमा स्याम्पु लगाउनाले कपाल रुखो हुन्छ ।
-कपाललाई राम्रो सँग भिजाएपछि स्याम्पु लगाउनुहोस्।
-स्याम्पु टाउको पछाडीबाट लगाउदै आगाडी तर्फ आउनुहोस्